यी राशि हुने युवतीहरु हुन्छन् अत्याधिक भाग्यशाली! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > यी राशि हुने युवतीहरु हुन्छन् अत्याधिक भाग्यशाली!
admin July 28, 2020 July 28, 2020 जीवनशैली, धर्म सँस्कृति	0
एजेन्सी । ज्योतिष शास्त्रमा पनि कुण्डली अनुसार नै उसको भविष्य कस्तो हुन्छ भनेर हेर्ने गरिन्छ । ज्योतिष शास्त्र अनुसार मेष राशि हुने युवतीहरु धेरै नै भाग्यशाली हुने गर्छन् । यो राशि हुनेहरुलाई धनी पति मिल्ने र पतिले धेरै माया गर्ने बताइएको छ ।
यस्ता छन् साउनमा महिलाले हरियो चुरा लगाउनुको महत्त्व
साउन महिना महिलाहरूले हातमा हरियो चुरा लगाउने गर्छन् । ज्योतिषशास्त्र अनुसार हरियो रंग लगाउँदा बुध बलियो भएर सन्तान सुख प्राप्ति हुन्छ । अनि यस रंगले बुद्धि र समृद्धि प्राप्ति हुन्छ ।
विवाहित महिलाका लागि रातो रंग खुशी र सौभाग्यको प्रतीक हो । अनि हरियो रंग चाहिँ परिवार र जीवनमा खुशी ल्याउनका लागि लगाइन्छ ।
हरियो रंग लगाउँदा महादेव प्रसन्न हुन्छन् । त्यसैले महिलाहरू साउन महिनामा हरियो मेहन्दी र हरियो चुरा लगाउने गर्छन् ।
धरानमा भिषणा आगलागी, पसलहरू जलेर यस्तो क्षति (भिडियो सहित)
ऐश्वर्याले कोरोनालाई जितेर घर फर्किदा अभिषेक र अमिताभ यस्तो अवस्थामा